Muxuu ka yiri Macallinka xulka Argentina ee Lionel Scaloni haddii uu Lautaro Kooxda Barcelona kula biiro Leo Messi? – Gool FM
(Barcelona) 03 Juun 2020. Macallinka xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa sheegay in ka garab ciyaarista laacibka Waddankiisa ee Lionel Messi inuu u fiican yahay xiddiga Inter ee Lautaro Martinez, iyadoo ay sii kordhayaan wararka la xiriirinaya Lautaro Naadiga Barcelona.
Lautaro ayaa la sheegay inuu ka tagayo Kooxda Inter ee ka ciyaarta horyaalka Serie A-da, isla markaana uu ku biirayo Kooxda difaacaneysa horyaalnimada La Liga kaddib markii uu ka faa’iideystay Talyaaniga.
Weeraryahanka xulka qaranka Argentina ayaa dhaliyey 16 gool 31 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan ka hor xilli ciyaareedkan 2019-20, ka hor inta aan kubadda cagta loo joojin faafaha Coronavirus.
Iyadoo la isla dhexmarayo mustaqbalka Lautaro, Tababaraha xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa ka hadlay 22-sano jirkaan.
“Haddii uu la ciyaaro Messi waa u fiican tahay, shaki la’aan, wixii intaas ka dambeeya waxa uu u dagaalami doonaa booskiisa sidii uu ugu ciyaari jiray Inter,” Scaloni ayaa sidaas u sheegay Warsidaha TyC Sports.
“Waa inaan is dejino, haddii uu kooxaha kala beddesho, laga yaabee inuusan u baahnayn inuu noqdo bilowga aan kala tashan oo nama saameyn doono, illaa inta uu haysto dhowr daqiiqo oo u oggolaanaya inuu xoog bixiyo.
“Wuxuu leeyahay mustaqbal aad u weyn, laakiin wali wax badan ayuu siinayaa.”